Aiza no hijerena ny fanatanjahantena mandritra ny vanim-potoana 2021-2022? | Vaovao Gadget
Aiza no hijerena ny fanatanjahantena amin'ity vanim-potoana ity?
Diego Lopez | 09/09/2021 14:53 | General
Ny septambra dia mitovy hevitra amin'ny fiverenana amin'ny ara-dalàna, na dia amin'ny ankamaroan'ny fanatanjahan-tena aza. Matetika ny fifaninanana ara-panatanjahantena dia manomboka ny vanim-potoana mifanaraka aminy na manohy izany. Ka tsy hahadino anao, avy Vaovao Gadget dia holazainay aminao hoe aiza no ahitanao ny fifaninanana fanatanjahan-tena lehibe amin'ny vanim-potoana 2021/22.
Raha ny mahazatra dia manomboka mijery baolina ianao amin'ny tapa-bolana farany amin'ny volana Aogositra. Iray ihany no naningana izay nahatonga ny daty hifindra amin'ny kalandrie ary tamin'ny COVID tamin'ny taon-dasa. Ity vanim-potoana ity dia mbola misy sisa tavela amin'ny areti-mifindra fa amin'ny ambaratonga kely kokoa. Ny fivoarana miandalana dia hamela ny fiverenan'ny besinimaro any amin'ireo kianja, na dia eny aza, amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fahaiza-manao voafetra.
Ka raha iray amin'ireo tsy mahazo mividy tapakila ianao dia afaka matoky satria mbola hanana safidy hijerena ny LaLiga amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ireo sanda rehetra lazain'izy ireo aminay ireo. Roams. Amin'ity taona ity dia averimberina ny fampitahana tamin'ny taon-dasa. Movistar sy Orange no hany mpandraharaha ahafahanao mijery baolina amin'ny alàlan'ny fonosana mifandray, ny tahan'ny Fusion sy ny Fitiavana, tsirairay avy.
Amin'ny tranga basketyHiankina amin'ny haavon'ny fifaninanana izany. Raha a fifaninanana eropeana toa ny Euroleague, ny Champions Champions League na ny Eurocup, hitanao via DAZN; raha ny ligin'ny Endesa, amin'ny Movistar, iza no manana ny zon'ny fandefasana amin'ity tompon-daka ity.
Ary ny fanatanjahan-tena hafa?
Amin'ny maotera, ny fifaninanana mpanjakavavy dia ny Formula 1 sy MotoGP. Na dia volana vitsivitsy sisa aza ireo tompon-daka ireo dia azonao atao ihany ny manararaotra ireo kapoka farany. Raha ny marina, raha mitaingina azy tsara ianao dia afaka jereo ny antsasaky ny sisa amin'ny vanim-potoana maimaim-poana. Ny antony dia nahazo ny zon'ny fampielezam-peo hatramin'ny 2022 ny DAZN ary manana fotoam-pitsarana maimaimpoana iray volana. Ary, arakaraka izay tianao, azonao atao ny misoratra anarana amin'ny sehatra isam-bolana na isan-taona.
Ankoatra izany, Movistar dia nanao fifanarahana tamin'ny DAZN, noho izany dia azonao atao ihany koa ny mahita ny atin'ny motera amin'ny alàlan'ny mpandraharaha manga. Tafiditra ao amin'ny fonosana Motor TV izy, izay ampidirina amin'ny vidiny amin'ny isa roa amin'ny Fusion (andalana Fusion Plus sy Fusion Total Plus 4). Amin'ny ambin'ny saran'ny Fusion dia mila mandoa ny vidin'ny fonosana avo kokoa ianao.
Ny bisikileta dia eo am-piomanana tanteraka ankehitriny amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Eoropa ao Trento, tanàna italianina. Ka raha tia an'ity fanatanjahantena ity ianao, azonao atao ny mijery ny hazakazaka bisikileta rehetra amin'ny alàlan'ny DAZN. Ny sehatra dia manana fantsona Eurosport roa (Eurosport 1 sy Eurosport 2), izay manana ny zon'ny fampielezam-peo amin'ny bisikileta rehetra. Raha ny marina, ny Ny fantsona Eurosport 1 dia ao anatin'ny orinasa toa an'i Orange, Vodafone na Virgin Telco ihany koa.
Misy koa ny mety jereo ny bisikileta miaraka amin'ireo mpandraharaha toa an'i Yoigo, Movistar, Guuk na MásMóvil. Amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny DAZN, izay tafiditra ao anatin'ny sarany sasany mivantana amin'ny vidiny ary amin'ny hafa, ny vidiny avo kokoa dia tsy maintsy aloa.
Amin'ny tenisy dia mitovy amin'ny bisikileta. Mazava ho azy, miankina amin'ny fifaninanana no hanananao azy amin'ny toerana iray na amin'ny toerana hafa. Ny telo amin'ireo Grand Slam efatra (Roland Garros, US Open ary Australian Open) dia hita ao amin'ny Eurosport 1, azo zahana amin'ireo mpandraharaha toa an'i Yoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone na Virgin Telco ary amin'ny DAZN. Amin'ny lafiny iray, Wimbledon ao Movistar, izay nividy ny zon'ny audiovisual. Amin'ny fifaninanana ambany kokoa toa ny Master 1000, 500 ary 250, ireo lehilahy dia hita ao amin'ny Movistar sy ireo vehivavy ao DAZN.
Betsaka ny fanatanjahan-tena ary fomba ahitanao azy ireo koa. Ankehitriny dia mila misafidy ny fanatanjahan-tena tianao indrindra ianao ary mankafy azy mandritra ny vanim-potoana manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Aiza no hijerena ny fanatanjahantena amin'ity vanim-potoana ity?
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fahatongavan'i HBO Max any Espana